UMGAQO-NKQUBO WABUCALA | PAMPEREDPEOPLENY.COM - OKUNYE
IHundeshagen Digital Media, LLC d / b / iHundeshagen Industries, abaxhasi bayo kunye neenkxaso (i 'IHundeshagen' , 'thina' okanye 'thina' ) ixabisa ubumfihlo babasebenzisi bethu kunye nababhalisi. Sizama ukungafihli malunga nendlela esiqokelela kwaye sisebenzise ngayo ulwazi lwakho, ukugcina ulwazi lwakho lukhuselekile kwaye sikunike ukhetho olunokuba luncedo. Lo Mgaqo-nkqubo Wabucala ( 'Umgaqo-nkqubo' ) ichaza iinkqubo zabucala ze www.pamperedpeopleny.com iwebhusayithi (ifayile ye- 'Indawo' ), ezizezabanini neziqhutywa yiHundeshagen. Lo mgaqo-nkqubo wenzelwe ukukunceda uqonde ukuba loluphi ulwazi oluqokelelwa nguHundeshagen, kutheni le nto siqokelela kwaye senza ntoni ngayo.
Indawo ayenzelwanga abantwana abangaphantsi kweminyaka eli-13 ubudala, kwaye asiqokeleli sazi ulwazi oluvela kubantwana abangaphantsi kweminyaka eli-13. Ukuba sifumanisa ukuba siqokelele okanye safumana ulwazi lomntu siqu kumntwana ongaphantsi kweminyaka eli-13 ngaphandle kokuqinisekiswa kwemvume yabazali, siya kucima olo lwazi. Ukuba uyakholelwa ukuba singanalo naluphi na ulwazi malunga okanye malunga nomntwana ongaphantsi kwe-13, nceda unxibelelane nathi apha imfihlo@pamperedpeopleny.com .
Unxibelelwano lweNtengiso kunye noKwabelana namaQela esiThathu. Ungahlaziya ukhetho lwakho ngokubhekisele ekufumaneni unxibelelwano oluthile lokuthengisa kuthi, kunye nokwabelana kwethu ngolwazi lomntu kunye nomntu wesithathu. Unokwenza njalo ngokuqhagamshelana nathi apha imfihlo@pamperedpeopleny.com . Unokukhetha ukufumana unxibelelwano lokuthengisa nge-imeyile, ngokulandela imiyalelo 'yokungabhalisi' enikezelwe kuyo yonke imeyile oyifumanayo kuthi. Unokuhlengahlengisa izaziso zakho zesixhobo kwifowuni yakho okanye kuseto lweapp.
Amalungelo abucala eCalifornia. Ikhowudi yaseCalifornia Civil Code Icandelo 1798.83 livumela abasebenzisi beSayithi yethu ukuba bangabahlali baseCalifornia ukuba bacele ulwazi oluthile malunga nokuxelwa kwethu kolwazi lomntu ngamnye kubantu besithathu ngeenjongo zokuthengisa ngokuthe ngqo. Ukwenza isicelo esinjalo, nceda unxibelelane nathi apha imfihlo@pamperedpeopleny.com .
Umthombo wecookie: pamperedpeopleny.com
Ukubuza kulwazi lomntu siqu esiqokelele malunga nawe kwi-Intanethi kwiSayithi apho lo Mgaqo-nkqubo wabucala uthunyelwe khona okanye ukulungisa olo lwazi, ungasithumela i-imeyile imfihlo@pamperedpeopleny.com . Ungacela kwaye ufumane ukususwa kweMinikelo yaBasebenzisi ngokuthumela i-imeyile imfihlo@pamperedpeopleny.com ngesicelo sakho kwaye ucacisa iGalelo elithile loMsebenzisi ofuna ukusisusa. Asinakho ukwamkela isicelo sokutshintsha okanye sokucima naluphi na ulwazi ukuba sikholelwa ekubeni isenzo esinjalo siya kwaphula nawuphi na umthetho okanye iimfuno zomthetho okanye senze ukuba ulwazi lungalunganga. Ukususwa kweGalelo lakho loMsebenzisi kwiSiza akuqinisekisi ngokususwa ngokupheleleyo okanye okupheleleyo kweziGalelo zoMsebenzisi kwiSayithi njengoko iikopi zinokuhlala zibonwa kumaphepha agciniweyo kunye noovimba okanye zinokukhutshelwa okanye zigcinwe ngabanye abasebenzisi beSayithi. Ungarhoxa kuyo nayiphi na iincwadana zeendaba okanye iiimeyile zentengiso ezahlukeneyo nangaliphi na ixesha ngokunqakraza kwikhonkco elithi 'ungazibhalisi' ezinikiweyo kunxibelelwano olunje. Awunakho ukuphuma kunxibelelwano olunxulumene neSiza, njengokuqinisekiswa kweakhawunti, ukuqinisekiswa kokuthenga kunye nemiyalezo yolawulo, ukuba nje ubhalisile kwiSiza.
Iinkxalabo Zabucala. Ukuba unenkxalabo okanye isikhalazo malunga nobumfihlo kwiSayithi, nceda uqhagamshelane nathi eHundeshagen Digital Media, LLC., Attn: Imicimbi yezomthetho, iZiko loYilo lwePacific, iRed Building West, 750 N. San Vicente Blvd., 9th Floor, East Hollywood , CA, 90069, USA okanye i-imeyile kuthi imfihlo@pamperedpeopleny.com . Siza kwenza konke okusemandleni ethu ukukuphendula ngexesha elifanelekileyo nangobungcali ukuze siphendule imibuzo yakho kwaye sisombulule iingxaki zakho. © IHundeshagen Digital Media, LLC. Onke Amalungelo Agciniwe. I-Purpleclover kunye ne-Purpleclover.com ziimpawu zorhwebo zeHundeshagen Digital Media, LLC
Izibonelelo zamagqabi e curry kulusu
Sithumela i-imeyile apha: imfihlo@pamperedpeopleny.com
Ukuba unenkxalabo okanye isikhalazo malunga nobumfihlo kwiSayithi, iindlela esiqokelela ngazo kwaye sisebenzisa ulwazi lwakho lomntu siqu, ukhetho lwakho kunye namalungelo malunga nokusetyenziswa okunjalo, okanye unqwenela ukusebenzisa amalungelo akho phantsi komthetho waseCalifornia, nceda ungathandabuzi ukunxibelelana nathi eHundeshagen Digital Media, LLC., Attn: Imicimbi yezomthetho, iZiko loyilo lwePasifiki, iZakhiwo eziBomvu eNtshona, i-750 N. iSan Vicente Blvd., kuMgangatho we-9, eMpuma Hollywood, CA, 90069, e-USA, sithumele i-imeyile apha imfihlo@pamperedpeopleny.com okanye utsalele umnxeba ku-1-866-522-5025.
IHundeshagen Digital Media, LLC d / b / iHundeshagen Industries, amahlakani ayo kunye neenkxaso ('Hundeshagen', 'thina', 'thina', okanye 'wethu') sixabisa ubumfihlo babasebenzisi bethu kunye nababhalisi. Sizama ukungafihli malunga nokuba siluqokelela njani kwaye silusebenzisa njani uLwazi lwakho (njengoko kuchaziwe ngezantsi), ukugcina ulwazi lwakho lukhuselekile kwaye sikunike ukhetho olunentsingiselo. Lo Mgaqo-nkqubo Wabucala ('Umgaqo-nkqubo') uchaza iindlela zabucala ze www.pamperedpeopleny.com iwebhusayithi ('iSiza'), ephethwe, kwaye iqhutywa, iphelele okanye iyinxalenye, yiHundeshagen. Lo Mgaqo-nkqubo ucacisa ukuba luqokelelwa njani, lusetyenziswa njani, kwaye luxelwa njani yiHundeshagen njengomlawuli wedatha.
Indawo yethu ibanjelwe eUnited States. Oku kuthetha ukuba uLwazi esiluqokelelayo luya kwenziwa kuthi e-United States, ilizwe elinemigangatho esezantsi yokukhusela idatha yobuqu kune-European Union. Nangona kunjalo, njengoko sinikezela indawo yethu kunye neenkonzo kubahlali kwi-European Union, iHundeshagen ke ikwaxhomekeke kwimithetho yaseYurophu yokukhusela idatha, ngakumbi i-EU General Data Protection Regulation (i-GDPR).
IHundeshagen ikwinkqubo yokuchonga ummeli we-EU kwaye iya kukwazisa ngohlobo oluhlaziyiweyo lwalo Mgaqo-nkqubo wakuba umeli we-EU etyunjiwe.
Indawo ayenzelwanga abantwana abangaphantsi kweminyaka eli-16 ubudala, kwaye asazi ukuba siqokelela ulwazi oluvela kubantwana abangaphantsi kweminyaka eli-16. Ukuba sifunda ukuba siqokelele okanye safumana ulwazi lomntu siqu kumntwana ongaphantsi kweminyaka eli-16 ngaphandle kokuqinisekiswa kwemvume yomzali, siza kucima olo lwazi. Ukuba uyakholelwa ukuba singanalo naluphi na ulwazi malunga okanye malunga nomntwana ongaphantsi kwe-16, nceda unxibelelane nathi apha imfihlo@pamperedpeopleny.com
Itheyibhile engezantsi iqulethe inkcazo yobume beendlela ezahlukeneyo zokuqhubekeka komthetho ezikhoyo phantsi kwe-GDPR ethembele kuyo iHundeshagen xa iqokelela ulwazi:
Imvume: Apho uvumayo ukuba siyisebenzisa idatha yakho yobuqu (kwimeko apho uya kuthi unikwe ifom yemvume ngokunxulumene nalo naluphi na usetyenziso olunjalo kwaye ungayirhoxisa imvume yakho nangaliphi na ixesha ngokunika isaziso imfihlo@pamperedpeopleny.com
Sisebenzisa ulwazi esiluqokelelayo ukukhangela, ukuphanda, kunye nokuthintela imisebenzi eyaphula imigaqo yethu yokusetyenziswa, enokubakho ngobuqhetseba, yaphule amalungelo obunini, okanye eminye imithetho, ukuthobela iimfuno zomthetho, nokukhusela amalungelo ethu namalungelo kunye nokhuseleko lwabasebenzisi bethu. nabanye. Sinokubonelela ngedatha yakho yobuqu nakowuphi na umntu onokufumana okanye otyale imali nakweyiphi na indawo kwishishini likaHundeshagen ngeenjongo zokufumana okanye ukutyala imali.
IHundeshagen ilawula uLwazi lwakho kwaye ithathwa njengesilawuli sedatha njengoko kuchaziwe kwi-GDPR. Singabelana kwaye sichaze ulwazi oluhlanganisiweyo noluchongiweyo malunga nabasebenzisi bethu ngaphandle kwesithintelo.
Amazwe athile angaphandle kwe-EEA avunyelwe yiKhomishini yaseYurophu njengonikezela ngokhuseleko olufanayo njengemithetho yokukhusela idatha ye-EEA. Imithetho yokukhuselwa kwedatha ye-EU ivumela uHundeshagen ukuba adlulise ngokukhululekileyo idatha yobuqu kula mazwe. Nceda unxibelelane nathi ku imfihlo@pamperedpeopleny.com ukuba ungathanda ukubona ikopi yokhuseleko esisebenzisa ngokunxulumene nokuthumela idatha yakho yobuqu.
ukusebenzisa ubusi kunye nemon ebusweni
Ungahlaziya ukhetho lwakho ngokubhekisele ekufumaneni unxibelelwano oluthile lokuthengisa kuthi, kunye nokwabelana kwethu ngolwazi lomntu kunye nomntu wesithathu. Unokwenza njalo ngokuqhagamshelana nathi apha imfihlo@pamperedpeopleny.com . Unokukhetha ukufumana unxibelelwano lokuthengisa nge-imeyile, ngokulandela imiyalelo 'yokungabhalisi' enikezelwe kuyo yonke imeyile oyifumanayo kuthi. Unokuhlengahlengisa izaziso zakho zesixhobo kwifowuni yakho okanye kuseto lweapp.
iinwele zecala le-bun ngeenwele ezimfutshane
Iinkxalabo Zabucala . Ukuba unenkxalabo okanye isikhalazo malunga nobumfihlo kwiiSayithi, nceda unxibelelane nathi eHundeshagen Digital Media, LLC., Attn: Imicimbi yezomthetho, iZiko loyilo lwePacific, iRed Building West, i-750 N. San Vicente Blvd., 9thUmgangatho, eMpuma Hollywood, CA, 1312312, eU.SA okanye usithumelele i-imeyile kwi-email ngasese@pamperedpeopleny.com. Siza kwenza konke okusemandleni ethu ukukuphendula ngexesha elifanelekileyo nangobungcali ukuze siphendule imibuzo yakho kwaye sisombulule iingxaki zakho.
© IHundeshagen Digital Media, LLC. Onke Amalungelo Agciniwe. IHundeshagen kunye nepamperedpeopleny.com ziimpawu zorhwebo ezibhalisiweyo zeHundeshagen Digital Media, LLC
indoda nomfazi uthando ebhedini
Izibonelelo zokusebenzisa iitumato ebusweni
Isicwangciso sokutya sepcos sokunciphisa umzimba
Izibonelelo zembewu kalonji yezempilo
isipho somyeni ngobusuku bokuqala